C.E.O Tower (Office Building) First Floor | ရောင်းရန် | ဆိုင်ခန်း | 0.00 သိန်း | ShweProperty
ရောင်းရန် - ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း - C.E.O Tower (Office Building) First Floor
ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Listed on 24 March 2016 | Ask for price ဧရိယာ: 2700 sqft
ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဧရိယာ: 2700 sqft
C.E.O Tower (Office Building) First Floor
**Prime CDB (Kaba Aye Pagoda Road) Area,
**To Shwe Dagon Pagoda 4.Km
**To Air Port 10,Km
**To Sedona Hotel 2.Km
• Public Address System, CCTV Camera
• Fast Speed Internet
• Including Kitchen, Toilets, Storage on each floor
• Stand-by Generator • Car Parking
• 2700 sq.ft per floor • Hall type floors
•Type - 8 1/2 floors (The Whole Building)
• Area - 22,000 sq.ft Special price available during construction period Project Detail May Tower (Office Building)
OEPG Developement Co.,Ltd.
ဆက်သွယ်ရန် OCEAN EMERALD PEARL GROUP
No. 114/A, Kaba Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon.
22,000.00 သိန်း ဧရိယာ5500 sqft
Ask for price ဧရိယာ1238 sqft
15.00 သိန်း ဧရိယာ1620 sqft
12.00 သိန်း ဧရိယာ1000 sqft
3.00 သိန်း ဧရိယာ900 sqft
9.00 သိန်း ဧရိယာ5880 sqft
15.00 သိန်း ဧရိယာ800 sqft
15.00 သိန်း ဧရိယာ2275 sqft
16.00 သိန်း ဧရိယာ800 sqft
20.00 သိန်း ဧရိယာ2700 sqft
20.00 သိန်း ဧရိယာ880 sqft
စပြီးရှာရန် ဆက်သွယ်ရန် OCEAN EMERALD PEARL GROUP
ရောင်းရန် ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း ဗဟန်း ကို စိတ်ဝင်စားပါသည်။ ဒီအိမ်ခြံမြေ နှင့်ပါတ်သတ်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ပေးပို့ စေလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Enter the Captcha
Advertiser : OCEAN EMERALD PEARL GROUP
ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Asking Price : Ask for price
Phone no: 01-555645, +951-555262